Ampianaro Mamela Heloka ny Zanakao
Nahoana Isika no Tokony Hamela Heloka?
EFA nisy olona nanisy ratsy anao ve?... Nampijaly anao ve izy, sa nilaza zavatra nampalahelo anao?... Tokony hanisy ratsy azy koa ve ianao?...
Maro no mamaly ny ratsy natao taminy. Nampianatra anefa i Jesosy fa tokony hamela ny helok’ireo nanisy ratsy antsika isika. (Matio 6:12) Ahoana raha manao zavatra mampalahelo antsika foana ny olona iray? Impiry isika no tokony hamela ny helony?...
Izany no tian’i Petera ho fantatra, ka hoy izy tamin’i Jesosy: ‘Tokony hamela ny helony impito ve aho?’ Tsy ampy ny mamela heloka impito, satria hoy i Jesosy: ‘Tokony hamela heloka impito amby fitopolo ianao’, raha misy manota imbetsaka aminao.
Inona no tian’i Petera ho fantatra momba ny famelan-keloka?
Betsaka izany! Tsy ho tadidintsika akory aza amin’izay ny zavatra ratsy maro natao tamintsika. Izao àry ny fianarana tian’i Jesosy homena: Tsy tokony hitadidy ny isan’ny zavatra ratsy natao tamintsika isika. Tokony havelantsika ny helok’ireo mangata-pamelana amintsika.
Tian’i Jesosy haseho tamin’ny mpianany fa tena ilaina ny mamela heloka. Nilaza tantara iray àry izy, rehefa avy namaly ny fanontanian’i Petera. Hotantaraiko aminao ve?...
Nisy, hono, mpanjaka iray tena tsara fanahy. Nampindrana vola an’ireo mpanompony izy, rehefa nila izany izy ireo. Indray andro anefa, dia nasain’ilay mpanjaka namerina ny vola nindraminy ireo mpanompony ireo. Nentina teo anatrehan’ny mpanjaka ny mpanompo iray nananany vola denaria 60 tapitrisa. Vola be izany!
Inona no nitranga rehefa nangataka fotoana lavalava kokoa mba handoavana ny trosany tamin’ny mpanjaka ilay mpanompo?
Lanin’ilay mpanompo daholo anefa io vola io, ka tsy afaka nandoa ilay trosa izy. Nasain’ny mpanjaka namidy àry ilay mpanompo. Nasainy namidy koa ny vady aman-janany sy ny fananany rehetra mba handoavana ny volan’ny mpanjaka. Ahoana hoy ilay mpanompo rehefa nandre izany, araka ny hevitrao?...
Nandohalika teo amin’ilay mpanjaka izy sady niangavy hoe: ‘Omeo fotoana lavalava kokoa re aho fa haloako ny trosako rehetra e!’ Inona no ho nataonao raha ianao ilay mpanjaka?... Nalahelo azy ilay mpanjaka, ka namela ny helony. Tsy nasainy naverina ilay vola, na dia kely aza. Tsy maintsy ho nahafaly an’ilay mpanompo tokoa izany!
Inona anefa no nataon’io mpanompo io avy eo? Lasa izy ary nifanena tamin’ny mpanompo hafa nananany vola denaria zato monja. Noraisiny teo amin’ny tendany io mpanompo io ary nokendainy sady hoy izy: ‘Aloavy ny volako any aminao!’ Ahoana ny hevitrao raha misy manao toy izany, indrindra fa raha olona vao nafahana tamin’ny trosa be tokony haloany ilay izy?...
Inona no nataon’ilay mpanompo rehefa tsy nahaloa ny trosany ilay mpanompo namany?
Nahantra ilay mpanompo nitrosa vola denaria zato, ka tsy afaka nandoa an’io vola io teo no ho eo. Niankohoka teo an-tongotr’ilay tompon-trosa àry izy sady niangavy hoe: ‘Omeo fotoana lavalava kokoa aho fa haloako ny volanao.’ Tokony ho nanaiky ve izy?... Ahoana, raha ianao no teo amin’ny toeran’io tompon-trosa io?...
Tsy tsara fanahy tahaka an’ilay mpanjaka io mpanompo tompon-trosa io fa tonga dia nitaky ny volany. Nasainy nogadraina ilay namany satria tsy afaka nandoa ny trosany. Tsy faly ireo mpanompo hafa nahita izany zavatra izany. Nalahelo an’ilay mpanompo nogadraina izy ireo, ka lasa nitantara tany amin’ilay mpanjaka.
Tsy faly koa ilay mpanjaka. Tezitra be tamin’ilay mpanompo tsy namela heloka izy. Nantsoiny io mpanompo io ary nilazany hoe: ‘Ry mpanompo ratsy fanahy, navelako ny trosanao, sa tsy izany? Ka moa ve ianao tsy mba tokony hamela ny trosan’ny mpanompo namanao?’
Inona no nataon’ilay mpanjaka tamin’ilay mpanompo tsy namela heloka?
Tsy nanahaka an’ilay mpanjaka tsara fanahy taminy, io mpanompo tsy namela heloka io. Nasain’ilay mpanjaka nogadraina àry izy mandra-pandoany ilay trosany denaria 60 tapitrisa. Mazava ho azy fa tsy hahazo an’io vola io mihitsy izy raha nigadra. Midika izany fa higadra mandra-pahafatiny izy.
Hoy i Jesosy rehefa vita ilay fitantarana: ‘Tahaka izany koa no hataon’ny Raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy mamela ny rahalahinareo amin’ny fonareo ianareo.’—Matio 18:21-35.
Tokony hekentsika fa be dia be ny trosa ananan’Andriamanitra amintsika rehetra. Avy amin’Andriamanitra, na dia ny aintsika aza! Tena kely àry ny trosa ananantsika amin’ny olona, raha oharina amin’ny trosa ananan’Andriamanitra amintsika. Tahaka ilay vola denaria zato no trosa ananantsika amin’ny olona. Ny trosa ananan’Andriamanitra amintsika kosa dia tahaka ilay 60 tapitrisa, satria maro ny zavatra ratsy ataontsika.
Tena tsara fanahy anefa Andriamanitra, ka mamela antsika, na dia nanao zavatra ratsy aza isika. Tsy ny aintsika anefa no takiny ho takalon’izany, fa izao no tokony hotadidintsika: Avelan’Andriamanitra ny fahadisoantsika raha mamela ny fahadisoan’ny olona isika. Fianarana lehibe izany, sa ahoana?...
Inona no hataonao raha misy mangataka famelan-keloka aminao?
Raha misy nanao zavatra nampalahelo anao, nefa mifona izy, inona no hataonao? Hamela ny fahadisoany ve ianao?... Ary ahoana raha miverimberina ilay fahadisoana? Mbola hamela azy foana ve ianao?...
Ho faly isika raha avela ny helotsika, rehefa mangata-pamelana isika, sa ahoana?... Tokony hamela heloka toy izany koa àry isika. Tsy ampy ny milaza hoe: ‘Mamela anao aho’, fa tokony tena hamela azy amin’ny fontsika mihitsy isika. Amin’izay isika dia mampiseho fa manahaka an’ilay Mpampianatra Lehibe.
Mba hahitana fa tena ilaina ny mamela heloka, dia andeha hovakintsika koa ny Ohabolana 19:11; Matio 6:14, 15; Lioka 17:3, 4.
Nampianatra Momba ny Famelan-keloka i Jesosy
Nilaza tamin’ny vehivavy iray nety ho mpivaro-tena i Jesosy fa voavela ny helony. Te hilaza ve izy fa tsy mampaninona ny mandika ny lalàn’Andriamanitra?
Hizara Hizara Nahoana Isika no Tokony Hamela Heloka?
Mahaiza Mamela Heloka
Ilaina ny Mamela Heloka